साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर दोस्रो सातालाई तय भएको साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
ओलीले भने, ‘साफ च्याम्पियनसिप बंगलादेशले आयोजना गर्ने भनेको नसक्ने भयो । नेपालमा गर्ने कि भनेर क्याप्टेनले भन्नुभयो । म तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु । आर यू रेडी टू विन त साफ ? तपाईहरु खेल्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन, आर यू रेडी टू विन ? यू ह्याब टू विन द साफ देन वि आर रेडी टू अर्गनाइज्ड द गेम ।’
आयोजक राष्ट्र बंगलादेशले प्रतियोगिताबाट हात झिकेपछि नेपालमा साफ आयोजना गर्न एन्फाले दाबी गरेको छ । प्रतियोगिताका लागि सेप्टेम्बर १४ देखि २५ सम्मको समय निर्धारण गरिएको छ ।
बंगलादेशले कोरोनाको असर, मुख्य प्रायोजकको खडेरी र बंगबन्धु रंगशालाको पुनर्निर्माण यसै वर्ष गर्नुपर्ने भएकाले प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसक्ने बताइसकेको छ ।
बंगलादेशले प्रतियोगिता आयोजनाबाट हात झिकेपछि नेपालसँगै श्रीलंकाले पनि साफ आयोजनामा दाबी गरेको छ । नेपाललाई आयोजना गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सहयोग गर्न नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेमजोङले कार्यक्रममा सरकारसँग अपिल गरे ।
गत वर्ष नै बंगलादेशले आयोजना गर्ने भनिएको प्रतियोगिता कोरोना माहामारीका कारण एक वर्ष पछि धकेलिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दसैँको बेलामा प्रतियोगिता हुने भएकाले खेलाडीलाई उपाधि उचाल्दै दसैँ मनाउने लक्ष्यसहित तयारी गर्न आग्रह गरे ।
पछिल्लो पटक नेपालले सन २०१३ मा दशरथ रंगशालामा साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको थियो । घरेलु रंगशालामा आयोजना गर्दा नेपालले अन्तिम चार सम्मको यात्रा तय गरेको थियो भने पछिल्लो पटक सन २०१८ मा बंगलादेशमै आयोजना हुँदा पनि नेपाल सेमिफाइनल पुगेको थियो ।
प्रकाशित मिति : असार २७, २०७८ आइतबार १७:२२:१२,